September 11, 2017 - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २६, काठमाडौँ । नैकाप गोल्डकपको दोस्रो संस्करणको उद्घाटन आज सोमबार चन्द्रागिरी नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरिको प्रमुख आतित्थ्यमा नैकाप फुटबल मैदानमा भएको छ । उद्घाटन खेलमा च. न. पा १५ ढुंगेअड्डा युनेश्कोले प्रयासरत नेपाल नैकाप माथि ५-१ को फराकिलो जीत दर्ता गर्न सफल भएको छ । खेलमा ढुंगेअड्डा युनेश्कोको तर्फबाट समीर कार्की र रुजित पुडासैनी ले २-२ गोल गरेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच ढुंगेअड्डा युनेश्कोका सुजित बुडाथोकी भए जसले १ गोल थप्दै आफ्नो टिमलाइ ५-१ को फराकिलो जित दिलाउन सफल भए । प्रयासरत नेपालका तर्फ बाट एक मात्र सान्त्वना गोल सिद्दार्थ कार्की ले गरे । नैकाप गोल्डकपकोपूरा पढ्नुहोस्
हाइड्रोजन परीक्षणमा हानीकारक विकीरण छैन– चीन
भदौ २६, बेइजिङ । गत हप्ता उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणबाट मानवीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालका कुनै पनि विकीरणहरु नदेखिएको चीनले जनाएको छ । उत्तर कोरियाले गत हप्तामात्र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली परीक्षण गरेको थियो । उक्त परीक्षणबाट मानवीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालको कुनै विकीरण भए नभएको बारेमा चीनले अध्ययन गरेको थियो । चीनको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मन्त्रालयले गरेको सो अध्ययनपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । उक्त मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा वातावरणलाई अथवा मानवीय स्वास्थ्यलाई असर पर्ने खालका कुनै पनि विकीरणहरु नपाइएको जनाइएको हो । चीनको सो मन्त्रालयको वेभसाइटमा दिइएको छ– यसरी गरिएको अध्ययनमा उत्तर कोरियाले हालै गरेको सो परीक्षणका कारण वातावरणीयपूरा पढ्नुहोस्
सुर्खेतमा चार सय उद्योग थपिए
भदौ २६, सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्लामा ४३० उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग १३४ वटा दर्ता भएका छन् । उत्पादनमूलक ७२, कृषि तथा वनजन्य १७०, पर्यटन उद्योग ८२ तथा ७२ वटा निर्माण उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी फर्निचर उद्योग, पोल्ट्रि फर्म, वर्कसप, दूध डेरी, ब्युटीपार्लर, मौरीपालन तथा जडीबुटीलगायत उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत इन्द्रबहादुर थापाका अनुसार अघिल्ला आवको तुलनामा यस वर्ष उद्योग दर्ताको संख्या बढेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक मेसिन र औजारमा अनुदान सहयोग र विभिन्न तालीमको व्यवस्था गरेपछि उद्योगको संख्यापूरा पढ्नुहोस्
भदौ २६, वालिङ (स्याङ्जा) । जनता आवास कार्यान्वयन एकाइ अन्तर्गत स्याङ्जाका विभिन्न ४ स्थानमा ९६ वटा घर निर्माण भइरहेका छन् । कास्कीस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको जनता आवास कार्यान्वयन एकाइमार्फत अति विपन्न, माझी तथा पिछडा वर्गका लागि ती भवन निर्माण गरिएको हो । उक्त कार्यालयका शाखाअधिकृत प्रेमप्रसाद पाण्डेकाअनुसार स्याङ्जामा १ सयवटा घर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइए पनि चारवटा घरको सम्झौता नभएका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा ३२, पुतलीबजारमा १९, भीरकोटमा २२ र चापाकोट नगरपालिकामा २३ गरी जिल्लाभरी ९६ वटा अति विपन्न, माझी तथा पिछडा वर्गका समुदाय छनोट गरी घर निर्माण गरिएकोपूरा पढ्नुहोस्
भदौ २६, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यवसायी सम्मेलनको आज उद्घाटन गरे । दक्षिण एशिया महिला विकास मञ्चद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा सार्क सदस्य राष्ट्रहरुलगायत १८ देशका ८० महिला उद्यमी तथा नीति निर्माताको सहभागिता रहेको छ । सार्कअन्तर्गतको सो मञ्च दक्षिण एशियाली महिलामा उद्यमशीलता विकास गर्न क्रियाशील छ । २ दिने सो सम्मेलनमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा संलग्न महिला उद्यमीले हासिल गरेका सफलता, भोग्दैआएका समस्या एवं लगानीका बारेमा छलफल हुनेछ । विश्व व्यापार संगठनकाअनुसार यस क्षेत्रको कूल व्यापारको १० प्रतिशत हिस्सा मात्र महिलाको छ । तीमध्ये पनि साना तथा मझौला व्यापार/उद्यममा महिला संलग्न छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमापूरा पढ्नुहोस्
भदौ २६, काठमाडौँ । दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भीड देखिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र नेशनल ट्रेडिङले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको भीड देखिएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका ती पसलमा बाहिर तोकिएभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाइने संस्थानका विभागीय प्रमुख श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । विशेषगरी ती पसलमा दिउँसोदेखि उपभोग्य सामग्री किन्न उपभोक्ताको भीड लाग्ने गरेको छ । रामशाहपथमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा दैनिक १ सय बोरा चामल बिक्री हुने गरेको संस्थानका पुनितारानी साहले बताए । बासमती चामल किन्नका लागि उपभोक्ता बढी आउनेपूरा पढ्नुहोस्
प्रदेश नं २ को निर्वाचन संघीयताका पक्षधर र विरोधीलाई पहिचान गर्ने अवसर–नेता निधि
भदौ २६, जनकपुरधाम । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचन संघीयताका पक्षधर र संघीयताका विरोधीलाई पहिचान गर्ने अवसर भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको मिडिया सेन्टरद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीयता विरोधीलाई परास्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । पूर्व महामन्त्री निधिले नेकपा (एमाले) मधेश विरोधी शक्ति भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मधेशीलाई विदेशी भन्नेलाई मधेशी जनताले मतबाट सबक दिने समय आएको धारणा राखे । प्रदेश नं २ मा काँग्रेसको लहरलाई देखेर विपक्षी एमालेलगायतका दलहरुमा छटपटी बढेको बताउँदै एमालेकै कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको आरोप पनि लगाए । काँगेसकापूरा पढ्नुहोस्
भदौ २६, काठमाडौँ । एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले थाइलैण्डलाई २५५ रनले पराजित गरेको छ । मलेसियाको क्वलालाम्पुरस्थित क्लव अमानको मैदानमा सन्दिप लामिछानेले ७ विकेट लिएपछि थाइलैण्ड १० ओभरमा मात्र २६ रनमा समेटियो । टस हारेर ब्याटिङ गर्न पुगेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २८१ रन बनायो । नेपालका लागि अनिलकुमार साहले सर्वाधिक ९१ रन बनाए । सतक बनाउनबाट ९ रनले चुकेका साहले ७४ बलको सामना गर्दै ५ छक्का र ६ चौका प्रहार गरे । प्रनित थापा मगरले ६१ बलमा १ छक्का र ३ चौकासहित ५० रन बनाए । सन्दिप सुनारले ३२, रोहितकुमार पौडेललेपूरा पढ्नुहोस्
शुरबहादुर सिंह | September 11, 2017
भदौ २६, जुम्ला । मुलुककै जेठो प्राविधिक विद्यालयको नाम दर्ज गर्न सक्षम कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको उत्तम थलो मानिँदै आएको छ । विसं २०३७ मा स्थापित यो प्राविधिक शिक्षालयले राज्यले निकै दुर्गम मानेको हिमाली जिल्ला जुम्लाबाट मुलुकलाई दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म यसले राज्यलाई झण्डै ४ हजार प्राविधिक जनशक्ति प्रदान गरेको शिक्षालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले जानकारी दिए । उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिमा २ हजार ६०० पुरुष र १ हजार ३०० महिला रहेको उनले बताए। सिटिइभिटीको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै शिक्षालय प्रमुख चौधरीले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयले उत्पादन गरेको ८० प्रतिशत जनशक्ति मुलुकका विभिन्न निकायमा रोजगारपूरा पढ्नुहोस्
नारायण अधिकारी | September 11, 2017
भदौ २६, चितवन । साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्या–पर्यावरणम खल्बलिएपछि वन्यजन्तु प्रभावित बनेका छन् । बाढीले घाँसे मैदान हिलाम्मे छ भने १ ठाउँका वन्यजन्तु बाढीले अन्यत्र पुर्याएको छ । कतिपय आहार प्रजातिका जनावर मरेपछि मांसाहारी जनावरलाई पनि आहारको अभाव भएको छ । आहार नपाएपछि वन्यजन्तुहरु मानव बस्तीमा पस्न थालेका छन् । निकुञ्जको कूल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत जमिन घाँसे मैदान छ । पानीका स्रोतसँगै घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले नदी, खोला खोल्सा नजिक घाँसे मैदान रहेका छन् । निकुञ्ज हुँदै बग्ने ठूलो राप्ती नदीमा बाढी आएपछि चुरे पहाडबाट निकुञ्ज हुँदै राप्तीमा मिसिने खहरे खोलापूरा पढ्नुहोस्